Qasaaraha ka dhashay weerarkii garoonka Buulo-burde | KEYDMEDIA ONLINE
Qasaaraha ka dhashay weerarkii garoonka Buulo-burde
Axmed Mahad Nuur oo ah guddoomiyaha degmada Buulo-burde ayaa tilmaamay in subaxnimadii saakay, markii maamulka dagmada iyo ciidamada ay ku wajahnaayeen garoonka uu ka dhacay qarax ay Al-Shabaab hoos geliyeen matoor dhex yaalay garoonka.
BUULO-BURDE, Soomaaliya- Maamulka dagmada Buulo-burde ayaa Al-Shabaab ku eedeeyay inay ka dambeeyeen qaraxyada lagu burburiyay dhismaha cusub ee garoonka diyaaradaha ee dagmadaasi.
Dhismaha la qarxiyay ayaa loogu talagalay dadka ka dhoofaya ama kasoo dagaya garoonka inay sii maraan , Muuqaalo laga soo duubay garoonka ayaa muujinaya burburka xooggan ee soo gaaray.
Guddoomiyaha dagmada ayaa ballanqaaday guddoomiyaha inay sameyn doonaan hubin joogto ah oo ay amniga garoonka kala kaashan doonaan ciidamada AMISOM ee ka socda dalka Jabuuti.
Qaraxyadii lagu weeraray dhismihii garoonka diyaaradaha ee Buula-burde ee gobolka Hiiraan ayaa waxa uu dhaac kazoo gaaray shan ruux. Dadkii qaraxa ku dhaawacmay ayaa loo soo qaaday Magaalada Muqdisho, si loogu dabiibo.
Sannad kahor ayay Al-shabaab burburiyeen garoonka, tanina waxey qeyb ka tahay habacsanaanta amni eek a jirta garoonka iyo guud ahaan dagamada Buulo-burde oo ay go’doomiyeen Al-shabaab.